Vaovao - fomba 10 hanokafana ny ririnina holandey
1 Ny tsenan'i Krismasy
Eo alohan'ny arabe mamiratra sy fiara manidina amidy dia ho hitanao ny fomba fankalazan'ny Holandey ny Krismasy sy fandraisana ny fahatongavan'ny ririnina. Tanàn-dehibe sy kely dia hanana tsena Krismasy, miaraka amina fivarotana an-jatony mivarotra tsakitsaky Krismasy, fanomezana, jiro. , volom-borona, sary sokitra hazo, labozia ary maro hafa. Miaraka amin'ny mozika krismasy falifaly, afaka mihinana sy milalao ianao rehefa mankafy ny arabe mahafinaritra sy fampisehoana kely.
2.Ny fahazavana dia manazava ny alina mangatsiaka
Ny Fetiben'ny Jiro holandey koa dia manomboka amin'ny ririnina, mitondra hazavana mandritra ny alina lava. Ny Alterterdam, Eindhoven, eny fa na dia ny tanàna fromazy any Gouda aza dia manana fety kely, ary afaka mitaingina sambo miaraka amin'ny namana roa ianao hahita an'i Holland amin'ny alina.
Ny Amsterdam Light Festival dia atao hatramin'ny Desambra ka hatramin'ny Janoary isan-taona (ny Fetiben'ny hazavana 2016 dia hatao ny 1 desambra hatramin'ny 22 janoary). Mpanakanto maivana eran'izao tontolo izao no ho tonga any Amsterdam mba hampiranty ny sanganasan'izy ireo. Ny jiro dia hiampita ny lakandrano sy ny lalana manodidina hanazava ny alin'ny ririnina amin'ny lakandrano. Ny fomba tsara indrindra hahitana ny lakandrano dia amin'ny sambo alina, fa mila mividy tapakila mialoha ianao.
Ny festival Eindhoven Glow dia atao isan-taona amin'ny volana novambra, rehefa miseho endrika vaovao ny tanàna. Ireo fiangonana, fananganana tafo sy toerana maro hafa dia voaravaka jiro noforonin'ny mpanakanto natao hanintona ny mason'ny tsirairay. Ny halavan'ny làlana dia manodidina ny 3 ~ 4 kilometatra, azonao atao ny mankafy ny fahitana an'i Eindhoven amin'ny alina rehefa mandeha ianao. Mitranga isan-taona amin'ny volana Desambra ny alina, rehefa maty ny tanàna dia vonoin'ny tanàna ny fahitalavitra sy jiro rehetra, labozia an'arivony maro ho an'ny alina mandrehitra labozia. Mandritra izany fotoana izany, ny labozia mafana dia ampiasaina ihany koa mba hitsenana amin'ny taona vaovao.
3.Aza afenina amin'ny ririnina, toy ny onja-drivotra
Azonao an-tsaina ve fa amin'ny andro voalohan'ny Taom-baovao dia olona 10 000 no miara-mivory ary milentika ao anaty rano mangatsiaka miaraka amin'izay? Eny, any Hollande, adala io. any amin'ny tanàn-dehibe maherin'ny 80 manerana ny firenena. Tsy mampaninona na oviana na mangatsiaka ny ririnina holandey, dia nitatra hatrany ny tobin'ny antsitrika isan-taona.
4.Ireo karazana hetsika ranomandry rehetra amin'ny ririnina
Mazava ho azy fa tsidiho ny afovoan-tanàna Zwolle any Holandy hijerena sary sokitra misy ranomandry, izay iangonan'ny mpanakanto avy amin'ny firenena samihafa. Jereo ny fomba hamadihan'izy ireo ho majika, ny sary sokitra ranomandry noho ny fiaraha-miasa, mangarahara sy tsara tarehy. Ice Bar, ity tetikasa ity dia tsy maintsy apetraho amin'ny fandaharam-potoana rehefa tonga any Pays-Bas! Tsy any Suède ihany, fa koa any Netherlands. Na dia 10 degre aza dia ho lasa mangatsiaka ny zava-drehetra. Mazava ho azy fa manao akanjo mafana sy fonon-tànana manokana ianao mba hanafana ny vatanao ary mandritra ny antsasaky ny adiny iray no ankafizanao ny hatsiaka sy ny zava-pisotro misy alikaola.
Ny ririnina any Pays-Bas, dia tsy maintsy lazaina fa ny skating. Tsy misy tendrombohitra amin'ny toerana ambany izay tsy ahafahanao manao ski, fa ny skating kosa dia fanatanjahantena natokana ho an'ny olona maro. Miaraka amin'ny fianakaviana sy ny namana, mivezivezy eny ivelan'ny ranomandry, voahodidin'ny kaonseritra. efitrano sy tranombakoka, ary ho hitanao ny maro amin'ny olona mandihy sy milomano amin'ny ranomandry amin'ny skate, ary manafana miaraka amin'ny kaopy kakao mafana. Toa mahafinaritra kokoa ho an'ny ankizy tsy matahotra ny hatsiaka ny hatsiaka. ao amin'ny ala ririnina angano an'i Efteling; Mandehana fitsangatsanganana an-tany lavitra any amin'ireo firenena lavitra any amin'ny tranombakoky ny lalamby, jereo ny namoronana motera etona, ary milalao sary sokitra ranomandry amin'ny tananao manokana. Ho an'ny ankizy dia fahatsiarovana mahafaly izy ireo.
5. Fitsangatsanganana an-tsehatra
Aiza no ahazoako ny lasopy paiso tsara indrindra any Holandy? Mazava ho azy fa eo amin'ny fiaran-tariby Snerttram! Misy jiro mafana amin'ny tariby tariby, zavamaniry maitso ary mpanakanto akorisy milalao am-panahy, ary ilay mpitari-dalana dia hanolotra resadresa-poana hanamaivana ny toe-po. Eny an-dàlana, dia handalo ireo toerana malaza any Rotterdam. Ka ny fitsidihana tram-pitaterana dia fomba tsara hitsidihana an'i Holland amin'ny ririnina koa.
6.Fahinana manafana ny vatana ary manafana ny fo
Amin'ny krisimasy sy taom-baovao ho avy dia sakafo iray koa no manasongadina ny ririnina any Hollande. Ny ririnina any Netherlands dia tsy tokony ho fohy lasopy paiso, ary tsy maintsy manontany tena ianao fa tsy dia tsara loatra ity lasopy maitso hafahafa ity. ankafizin'ny sakafo atoandro amin'ny ririnina, miaraka amin'ny pitipoà, ovy, karaoty, seleria, miaraka amina henan-kisoa sy bacon, dia tena manankarena ny lasopy, raha manandrana azy ianao, dia tena hahazo ilay lovia matsiro sy ririnina feno angovo.
Stroopwafel, iray amin'ireo sakafon-tsakafo malaza indrindra. Miaraka amin'ny siramamy karamela eo afovoany, malemy ny any ivelany ary malefaka sy marefo ny ao anatiny, tena mamy nefa tsy matavy. Tena tia zava-mamy ny Holandey, ary tia mamorona ary mihinana koa. .Ny fomba tena marina fihinana an'ity cookie ity dia ny amina kafe na dite ny setroka ary nohanina mafana.
7.Winter mandeha amoron-tsiraka
Ririnina maina ny zava-drehetra, ranomandry an'arivony kilaometatra maro, manitsaka ny lanezy ary mijery ny ranomasina ihany koa dia karazana hatsaran-tarehy, manana fari-dranomasina 250 kilometatra i Netherlands, mba hahafahanao manafana ao amin'ny cafe akaiky.
8.Ny afomanga an-dalambe
Amin'ny alin'ny Taom-baovao amin'ny 31 desambra, ny tanàna rehetra dia hanao fampiratiana afomanga manokana. Anisan'izany ny tetezana Erasmus any Rotterdam. Ny olona dia mahazo mividy afomanga kely amin'ny fialamboly amin'ity andro ity.
9. Ny antoko street dia nidina an-dalambe ary nanao fety tamin'ny olona rehetra.
Hisy fankalazana misy lohahevitra maro samihafa eny an-dalambe sy kianja. Ohatra, ny hetsika Krismasy Sinterklaas, ny Fetiben'i Deventer's Dickens, na ny vanim-potoana fivarotana Krismasy. Fahafinaretana tokoa.
10. Mihainoa ny kaonseritra
Mandehandeha amin'ny kaonseritra klasika iray, mandehandeha amin'ny National Museum. Ny teatra sy ny tranombakoka koa dia mikarakara hetsika amin'ny lohahevitra isan-karazany mba hiantohana fa tsy hanirery ny ririninao any Netherlands.